ဂျပန်သို့ တတိယအခေါက် | စွန်းထင်ခဲ့သော မင်စက်များ
အင်း လာရပြန်ပြီ။ ဒီတစ်ခါနဲ့ ဆိုရင် တတိယမြောက်လို့ပြောရမယ်။ အခုတစ်ခေါက်ကတော့ ရုံးက လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့ အတူတူဆိုတော့ လမ်းမှာ ပျင်းစရာမကောင်းဘူး လို့ပြောရမှာပေါ့။ အမျိုးသမီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ပါ။ ဒီတစ်ခါ အလုပ်က သူနဲ့ အတူတူ ဆောင်ရွက်ရမှာ ဆိုတော့လေ။ သူမကတော့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဂျပန်နိုင်ငံသို့ ခရီးသွားခြင်းဆိုပါတော့။
ဒီလိုနဲ့ပဲ လေယာဉ်ပျံကြီး စီးပြီးတော့ ဂျပန်နိုင်ငံကို သွားခဲ့ပါတယ်ပေါ့။ လေဆိပ်ရောက်တော့ အတူလာတဲ့ သူမကို ကြောင်နေတဲ့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်က လာနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ အတော်လေးကို ရုပ်ကလပ်က စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။ ပြောတော့ပါဘူး။ အဲဒီလိုနဲ့ ရထားစီးပါတယ်ပေါ့။ ဒီတစ်ခါတော့ ဘယ်သူမှ ကျွန်တော့ကို လာမကြိုကြပါဘူး။
နေရမယ့် အဆောင်ရှိတဲ့ ကျွန်းကြီးရပ်ကွက်ကို ရထားစီးသွားခဲ့ပါတယ်။ အထုပ်တွေကို ဒီအတိုင်းပဲ သယ်လာလိုက်မိတာ မှားတာပါပဲ။ ဓာတ်လှေကားမရှိတဲ့ ဘူတာအကူးမှာ သယ်လိုက်ရတာ ဖက်ဖက်ကို မောရောပဲ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆိုတဲ့ သူမရဲ့  အိတ်ကိုလည်း သယ်ပေးလုိုက်ရပါသေးတယ်။
ကျွန်းကြီးရပ်ကွက်ကနေ အဆောင်ကို တော့ တကစီ စီးသွားပါတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် သူမနေမယ့် အခန်းကို အရင်သွားတော့ ရောက်နှင့်နေတဲ့ မမကြီးက ထမင်းချက်ပြီး စောင့်နေတာနဲ့ နေ့လယ်စာ အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ စားသောက်ပြီး တော့ ကိုယ်နေမယ့် အခန်းကို တက်သွားတော့ စစခြင်း ရလိုက်တာကတော့ ဆေးလိပ်အနံ့ပါပဲ။ အော် ဆေးလိပ်နံ့ က တယ်ဆိုးပါလားပေါ့။ အခန်းဖော် ဘော်တာကြီးက ဆေးလိပ်ကြိုက်သကိုး။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကိုယ်အိပ်မယ့် နေရာလေးကို ပြင်ဆင်ပြီး တရေးတမော လှဲရင်းနဲ့ပဲ တတိယမြောက် ဂျပန်ဘ၀ကို စတင်ဖို့ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ဂျပန်ကတော့ ဘာမှ မပြောင်းလဲပဲ သနားစရာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဘာမှ ပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့ ဒီနေရာမှာပဲ ပြောင်းလဲမှုတွေ ကို စတင်ရှာဖွေဖို့ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
This entry was posted on Saturday, October 2nd, 2010 at 9:38 pm	and posted in 日本.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
« မုန်းလေပြီ စက်တင်ဘာ
မတူညီမှုများနှင့် ကခုန်ခြင်း »
One response to “ဂျပန်သို့ တတိယအခေါက်”
“a kha mel. ku ri htan chin” so del. har ko tha thi ya thwar tel 🙂